Alarobia 14 Jolay 2021
Latabatra Fisakafoana Ny Augusta dia namerina namerina ny latabatra fisakafoanana mahazatra. Maneho ny taranaka eo alohanay, ny zavaboary dia toa mitombo avy amin'ny faka tsy hita maso. Ny tongotra latabatra dia mifototra amin'io kofehy iraisana io, miakatra mihazona ilay takelaka mifanentana amin'ny boky. Ny hazo walnut eropeana dia nofidina noho ny dikan'ny fahendrena sy ny fitomboana. Ny kitay matetika arahin'ireo mpanamboatra fanaka dia ampiasaina amin'ny fihaikana miasa aminy. Ny antsy, ny kapoka, ny rivotra no mihetsika ary ny tady tsy manam-paharoa no mitantara ny fiainan'ny hazo. Ny maha-tokana ilay hazo dia mamela ity tantara ity hiaina ao anaty trano iray amin'ny fanaka ananan'ny fianakaviana.
Fonosana Kosmetika Ny foto-kevitry ny Clive cosmetics fonosana dia teraka fa hafa. Jonathan dia tsy te-hamorona makiazy firavaka hafa miaraka amin'ny vokatra mahazatra. Tapa-kevitra ny hitrandraka fahatsapana bebe kokoa sy kely kokoa noho ny heveriny amin'ny resaka fikarakarana manokana, izy dia tanjona iray lehibe. Ny fifandanjana eo amin'ny vatana sy ny saina. Miaraka amin'ny famolavolana aingam-panahy avy amin'ny Hawaii, ny fitambaran'ireo ravina tropikaly, ny tonon'ny ranomasina ary ny traikefa am-pahefana amin'ny fonosana dia manome fahatsapana ho miala voly sy fiadanana. Io fampifangaroana io dia ahafahana mitondra ny traikefany eo amin'io toerana io amin'ny famolavolana.
Alatsinainy 12 Jolay 2021
Ny Birao Niorina tamin'ny "triangle" ny tranobe misy ny sary hita masaka indrindra amin'ny endrika geometrika tany am-boalohany. Raha mijery avy amin'ny toerana avo ianao dia afaka mahita zoro dimy samy hafa telo Ny fitambaran-telozoro amin'ny habe samihafa dia midika fa ny "olombelona" sy ny "natiora" dia mitana toerana ho toerana hihaonan'izy ireo.
Sy Afisy PLANTS TRADE dia andiana endri-pamokarana mivoatra vaovao sy zava-kanto novokarina, izay novolavolaina hananganana fifandraisana tsara kokoa eo amin'ny olombelona sy ny natiora fa tsy fitaovana fampianarana. Ny Blaogin-tsofina momba ny varotra Plants dia voaomana hanampy anao hahatakatra ity vokatra famoronana ity. Ilay boky, natao tamin'ny mitovy habe amin'ny vokatra dia tsy vitan'ny sary voajanahary fotsiny fa ny sary tsy manam-paharoa natolotry ny fahendren'ny natiora. Ny mahaliana kokoa dia ny pirinty no nanonta tamim-pitandremana ny letterpress ka ny sary tsirairay dia miovaova amin'ny loko na ny lamba, toy ny zavamaniry voajanahary ihany.
Asabotsy 10 Jolay 2021
Ny Trano Fonenana Ny zava-misy fa ny fiainana milamina aorian'ny fisotroan-dronono izay mahatonga ny ankabeazan'ny havoana dia mahatsapa amin'ny alàlan'ny famolavolana maharitra amin'ny fomba mahazatra. Mitaky tontolo manankarena. Saingy tsy trano maritrano ny trano fa tsy trano manokana. Avy eo izahay nanomboka nanao rafi-piorina mifototra amin'ny hoe afaka mandany ny fiainana mahazatra milamina sy tsy misy fotony amin'ny drafitra iray manontolo.
Zoma 9 Jolay 2021
Peratra Mahazo aingam-panahy avy amin'ny endrika endrika aris sy avana sy avana ny mpamorona. Motif roa roa - endrika arisitra sy endrika latsaka no natambatra mba hamorona endrika 3 dimensional tokana. Amin'ny alàlan'ny fampifangaroana tsipika sy endriny kely ary mampiasa motifika tsotra sy mahazatra, ny valiny dia peratra tsotra sy kanto izay atao am-pahasahiana sy am-pitiavana amin'ny alàlan'ny fanomezana herinaratra sy onjam-peo hikoriana. Avy amin'ny zorony samy hafa ny endriky ny fiovan'peratra - ny endrika mioritra no jerena avy amin'ny zoro aloha, jerena amin'ny endrika zoro ny endrika aris ary hita amin'ny zoro ambony ny hazo iray. Manome aingam-panahy ho an'izay mitafy azy izany.
Alarobia 7 Jolay 2021
Reflexio Ny Tetikasa Typography Alahady 1 Aogositra
Simplest Happiness Ny Sary Mihetsika Momba Ny Varotra Asabotsy 31 Jolay
Chirming Afisy Zoma 30 Jolay
Latabatra Fisakafoana Fonosana Kosmetika Ny Birao Sy Afisy Ny Trano Fonenana Peratra